One 's Desires…Education Never Too Far – ပညာရေးဝေးသည်မရှိ | E-Learning Myanmar and Training Centers | Pro Net | E-Learning Myanmar and Training Centers | Pro Net
One 's Desires...Education Never Too Far - ပညာရေးဝေးသည်မရှိ
လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့သော ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင် အဆင့်မြှင့်ပညာရေးရပ်များကို ဝါဿနာပါပြီးသင်ယူလေ့လာခွင့်ရယူလိုသူလိုသော်လည်း ငွေကြေးအခက်အခဲ ၊ ပညာအခက်အခဲ နှင့်အခြားသောအခက်အခဲမြောက်မြားစွာတို့ကြောင့် မတတ်နိုင်ကြသူများ ဒုနှင့်ဒေးပင်။ ထိုသို့အခက်အခဲအကြပ်အတည်းများက နိုင်ငံတစ်နိုင်ကိုဦးဆောင်တည်ဆောက်မည့် အဖိုးထိုက်တန်လှသော လူငယ်လူရွယ်များ၏တိုးတက်ရေးအား အကြီးအကျယ်ဟန့်တားနေသည်။
သို့သော်လည်း တိုးတက်နေသာ နည်းပညာနှင့်အညီ မြန်မာနိုင်ငံမှကလေး ၊ လူငယ်များလည်း နိုင်ငံတကာတွင် ခောတ်ပေါ်နည်းပညာများကို အမှီလိုက်နိုင်ရန်အတွက် Telenor ၊ Ooredoo နှင့် MPT ကဲ့သို့သော Telecom ကြီးများ၏ပံ့ပိုးမှုကြောင့် အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ အင်တာနက်ကိုလွယ်လင့်တကူလက်လှမ်းမှီနိုင်ပြီလို့ ဆိုနိုင်ပြီ။ သို့သော်လည်း နယ်ဒေသကလေး ၊ လူငယ်များမှာ ဘာသာစကားအခက်အခဲအတိုင်းအတာတစ်ခုထိ ရှိနိုင်ပြီး နိုင်ငံခြားဝက်ဘ်ဆိုဒ်များသို့ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုလေ့လာရန်မလွယ်ကူလှပေ။ ထို့ကြောင့် ပြည်တွင်းသင်တန်းများသည် အသက်မွေးမှုပညာရပ်များကို ဖြန့်ဖြူးရာတွင် ကျောင်း ၊ တကသိုလ်ပြီးလျှင် အရေးပါဆုံး အရင်းအမြစ်များဖြစ်လာသည်။ သို့သော်လည်း နယ်ကျောင်းသားအနေဖြင့် မိမိနေထိုင်ရာ မြို့ ၊ တိုင်းဒေသကြီးများတွင် ယခုလက်ရှိခောတ်စားနေသော အတက်ပညာများ ၊ ယခုလက်ရှိအလုပ်တိုင်းတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်နေသော လုပ်ငန်းခွင်သုံး နည်းပညာများ ၊ အတက်ပညာများ ၊ အသိပညာများကို အချိန်နှင့် တပြေးညီသင်ကြားပေးနိုင်သော သင်တန်းများနည်းပါးခြင်း ၊ မြို့ပြကြီးများသို့ လာရောက်သင်ယူရန် အချိန် ၊ ငွေ အခက်အခဲများစွာ ရှိခြင်း အစရှိသော အခက်အခဲပေါင်းသောင်းခြောက်ထောင်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့် online e-learning ဟာ ဖော်ပြပါအခက်အခဲများကိုကျော်လွန်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံအဖို့ အလွန်အရေးပါသော ကွက်လပ်ကို ဖြည့်စွမ်းပေးနိုင်သည်ဟု ယူဆမိပါသည်။ သို့ပါ၍ online e-learning ကိုအသုံးပြုပြီး မိမိ နှင့် ပညာရေး ဆိုသည်မှာ ဝေးသည်မရှိနိုင်တော့ဘဲ မိမိစိတ်ထဲရှိသ၍လေ့လာနိုင်ကာ အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းပေါ်သို့ လျင်မြန်စွာတက်လှမ်းနိုင်ကြမည်မှာ ဧကန်မုချဖြစ်ပေသည်။
One ‘s Desires…Education Never Too Far
There are millions of people around the world, right now, who wish to access higher education but cannot. Online E-learning is one way of distance learning that presents an extraordinary opportunity to help address disparities in access across developing countries like Myamar. Online E-learning allows anyone, anywhere in the world, to study without requiring governments or private parties to expend heavy investments required in establishing and expanding traditional universities. Online E-learning allows foramore equitable and accessible higher education system whereby rural students can complete their studies without leaving their communities and students working to support their family can take advantage ofaflexible study schedule.
Yet, the use of Internet technology in education within developing countries can be challenging. In places with minimal infrastructure the application of this solution is not always straightforward. There are problems to consider such as the fact that many in developing countries like Myanmar do not have computers or individual Internet access, and if they do, it is usually not with broadband Internet. Broadband in developing countries is expensive relative to annual salaries. Many students study in Internet cafes,agood number of which do not have broadband Internet. But thanks to giant Telecom Providers like MPT, Telenor Myanmar and Ooreddo Myanmar, it is more convenient for users to use internet easily ever before.
ဇူလိုင် 18, 2017
3တုံ့ပြန်မှု "One 's Desires...Education Never Too Far - ပညာရေးဝေးသည်မရှိ"
Wah Wah Hlaingနိုဝင်ဘာ 15, 2017 at 1:27 ညနေပြန်စာရေးရန် အသင်းဝင် အဖြစ်ဝင်ရောက်ပါ။
Wah Wah Hlaingနိုဝင်ဘာ 15, 2017 at 1:30 ညနေပြန်စာရေးရန် အသင်းဝင် အဖြစ်ဝင်ရောက်ပါ။
Pdf file download ဆွဲမရလို့ရှင့်
Wah Wah Hlaingနိုဝင်ဘာ 15, 2017 at 1:33 ညနေပြန်စာရေးရန် အသင်းဝင် အဖြစ်ဝင်ရောက်ပါ။